အနက်ရောင် ရင်ပြတ်အင်္ကျီ နဲ့ အပေါ်ထပ်ကုတ် အင်္ကျီလေး အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ရွှေကစ် ၏ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…. – Shwe Naung
N N | June 5, 2021 | Celebrity | No Comments
အခုအခါမှာ ရွှေကစ်လေးက အနက် ရောင်ရင် ပြတ်အင်္ကျီ နဲ့ အပေါ် ထပ်ကုတ် အင်္ကျီလေးကို အတွဲအဖက် ညီညီ ဝတ်ဆင်ပြီး ဓာတ်ဖမ်းခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိ တဲ့အလှတရားတွေကို ပေါ်လွင်နေတဲ့ ရွှေကစ်လေးက မြင်နေကျပုံစံလေးနဲ့ မတူအောင် မိမိုက်ပြီး
အရမ်း အထာ ကျနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန် လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ပရိသတ်တွေ အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကတော့ နာမည်လေးလှသလို ရုပ်ရည်ရူပါ က လည်း ချောမော လှပနေသူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ရွှေကစ်လေးက ကိုရီးယားမလေး တစ်ယောက်လို ဖြူဖွေး ဝင်းဥတဲ့အသားအရေ လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့
အပြင် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကလည်း သွယ်လျ နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း ရွှေကစ်လေးကို ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ အချင်းချင်းကပါ ချစ်ခင်အားပေးပြီး ဝန်းရံ နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရွှေကစ်လေးက သရုပ်ဆောင် ပိုင်း မှာလည်း အင်မတန် ထူးချွန်သူဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ် တုနှစ်ခုကို ရယူ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမို အောင်မြင်လာတဲ့ ရွှေကစ်လေးက နိုင်ငံတကာနဲ့ လက်တွဲပြီး
အနုပညာအလုပ် တွေကို ကြိုးစား ပမ်းစားလုပ် ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖက်ရှင် အမြင် လည်းရှိတဲ့ ရွှေကစ်က သူများတွေ နဲ့မတူတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေးနဲ့ အမြဲတမ်းလှ နေတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ကထားတဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး….
လူရွှင်တော်ကြီး ဦးနေကျော်က အနုပညာ အလုပ်တွေ ရပ်နား သွားတော့ တုတ်ထိုး၊ ကြာဇံကြော် ၊ တို့ရောင်းပြီး ဘဝ ရုန်းကန်နေ………..